samsung giya s3 muganho uri kutengeswa kweinenge 30% kubviswa
Kuru Nhau & Ongororo Deal: Sevha kusvika kumadhora zana (30% wabviswa) pane iyo Samsung Gear S3 muganho
Deal: Sevha kusvika kumadhora zana (30% wabviswa) pane iyo Samsung Gear S3 muganho
Samsung iri kuita kusimudzira pane mamwe mawatchwatches ayo, saka kana iwe & apos; wanga uchitarisa chero yekambani & apos; s maGear anopfeka, ino ingave iri nguva yakanaka yekutarisa madhiri aya kunze. Kunze kweiyo Gear Sport smartwatch inouya nerusununguko Swarovski tambo (ukoshi $ 89), iwe unogona ikozvino kubata Gear S3 muganho we20% wabviswa.
Yakatangwa muUS gore rinenge gore rapfuura, iyo Gear S3 muganho yava kutengesa zvitoro zvikuru munyika muno nemadhora mazana matatu nemakumi matatu. Nekudaro, kwenguva yakati rebei, Samsung inopa smartwatch ye $ 300 chete kana $ 50 / mwedzi ne Samsung Financing (hapana chimbadzo kana chakabhadharwa chakazara mukati memwedzi mitanhatu).
Uyezve, vatengi vanotenga muganhu weGear S3 vanowana madhora zana kubviswa uye $ 50 eCertifiketi, kana vakatenga maGear IconX nzeve zvakare.
Sekureva kweSamsung, avo vanohodha smartwatch vanozoitumira mumazuva 1 kusvika matatu ebhizinesi. Zvakare, kutumira kwemahara kunowanikwa kune ese maodha, saka $ 300 (kana $ 250) ndiyo chete mari iwe & apos; yauchazobhadhara. Tsvaga zvimwe nezve smartwatch mune yedu Samsung Gear S3 muganho wekutarisa .
Samsung Gear S3 muganho
nexus 6p shanda paverizon
Bhash script - Mhoro Nyika Muenzaniso